Tunisia bu otu obodo no na Afrịka.
Ebe Tunisia no n'ime Afrịka.
Flag ndi Tunisia
Lee nke ozo
Burundi bu otu obodo no na Afrịka.
Chad, bukwaa Republic of Chad, bu otu obodo ndi oji no n'ime ala ukwu nke ana kpo Afrịka. Chad no na aka-ikpa Naigeria. Isi ya bu N'Djamena.
Kenya bu otu obodo no na Afrịka.
Madagascar bu otu obodo no na Afrịka.
Malawi bu otu obodo no na Afrịka.
Mali bu otu obodo no na Afrịka.
Mauritius bu otu obodo no na Afrịka.
Mayotte bu otu obodo no na Afrịka.
Na 1991, ebugara isi obodo ya n' Abuja. Isi obodo ya dibu na Lagos nke di na ndida anyanwu (Western Nigeria). Abuja buzi isi obodo no n'etiti Naijiria.Akuko mbido Naijiria hiri nne ma dikwa ogologo. Ihe egwuputara n'ala bu ihe na egosi ebe mmadu si, gosiri na mmadu bidoro biwe nebe a site na-afo mgbe ochie bu 9000 BC., Ebe Mmiri a na-akpo River Benue-Benue-Cross River bu ebe echere na ndi a na akpo ndi Bantu bi bu,Bantu/Bantu Migrants. Ndi a sitekwara ebea wee gbasaa rue n'Etiti Afrika central Africa nakwa ndida Afrika southern Africa n'igwe site na 1st millenium BC rue 2nd millenium AD.
Namibia bu otu obodo no na Afrịka.
Niger bu obodo no na Afrịka. O no n'elu Naigeria na Benin. Isi oche Niger bu ebe ana-kpo Niamey.
Réunion bu otu obodo no na Afrịka.
Seychelles bu otu obodo no na Afrịka.
Somalia bu otu obodo no na Afrịka.
Somaliland bu otu obodo no na Afrịka.
South Africa bu otu obodo no na Afrịka. Ego ndi South Africa bu Rand.
Sudan bu otu obodo no na Afrịka. Isi obodo ya bu Khartum. Aha nke okwa bu Repoblik Sudan.
Tanzania bu otu obodo no na Afrịka.
Zambia bu otu obodo no na Afrịka.